मेरो विश्वास छ म उहाँसँग छिट्टै भेट्दैछु (आनी छोइङ डोल्मा) | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← महोत्तरीमा फोरमका जिल्ला नेतामाथि गोली प्रहार
रोजगारीका लागि दैनिक १६ सय नेपाली विदेशिन थाले →
Posted on 25/07/2013 by डम्बर 'माइला' | १ टिप्पणी
ती संगीतकार थिए, एआर रहमान । मेरा प्रिय धुन सर्जक । उनका मनैदेखि छोएर गुज्रने संगीतले सदैव सिर्जनाका नयाँ नयाँ धार विकास गरिरहेको हुन्छ । यी ओस्कार विजेता संगीतकारसँग पछिल्ला केही दिन मैले सँगसँगै काम गर्ने मौका पाएँ । त्यसपछि लाग्न थाल्यो यिनमा आध्यात्मिकता पनि उत्तिकै भरिएको रहेछ । काठमाडौं फर्केर आएपछि म फेरि पछिल्ला केही साताको सम्झनामा डुबेकी छु।
यसभन्दा पहिले पनि म धेरैपटक सांगीतिक यात्राको क्रममा भारत पुगेकी थिएँ । गत वर्ष मात्र जयपुर साहित्य महोत्सवमा अतिथिकै हैसियतले म निम्त्याइएकी थिएँ । त्यतिबेला जावेद अख्तर र प्रसुन जोशीजस्ता लेखन क्षेत्रका नामी व्यक्तित्वसँग राम्रै संगतको मौका मिल्यो । जावेदजीसँग त मेरो त्यसभन्दा करिब डेढ वर्ष पहिले पनि ‘फूलको आँखामा’ गीतलाई हिन्दीमा गाउन कुराकानी चलेको थियो । उहाँले हिन्दीमा अनुवाद गरिदिने र मैले गाउने कुराको तारतम्य राजलक्ष्मी गोल्छाले मिलाउन खोज्नुभएको थियो । उहाँ गोल्छा परिवारकी बुहारी हुनुहुन्छ । समय नमिलेरै यो कुरा धेरै लम्बिन पुग्यो । त्यसपछि एकैपटक जावेदजीसँग जयपुरमा भेट भएको थियो।
त्यस क्रममा उहाँले नै यो प्रोजेक्टलाई अब हामीले अगाडि बढाऔं भनेर घच्घच्याउनुभयो । जयपुरबाट फर्किएपछि फेरि यो कुरा शान्त भएको छ।
मेरो अर्को महत्वपूर्ण भेट चाहिँ तेस्रो मुलुकमा हुनपुग्यो । गत वर्ष नोभेम्बरमा म अस्ट्रेलिया जाँदा टिना अम्बानीजी (पूर्व अभिनेत्री तथा भारतीय अर्बपति अनिल अम्बानीकी पत्नी) की दिदी र भिनाजु मेरो कन्सर्टमा आउनुभएको थियो । उहाँहरु त्यसपछि मेरो फ्यान बन्नुभयो । उहाँले ‘तपाईंको स्वरलाई अब भारतले पनि चिन्नुपर्छ’ भन्नुभयो । तत्कालै भव्य योजना सुनाउँदै भारतीय श्रोताका निम्ति एउटा बेग्लै एल्बम निकाल्ने बताउनुभयो । एल्बमको पहिलो १० लाख प्रति बेचेपछि त्यसपछिको पैसा मात्र आफूले हिस्सा दाबी गर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो।
करिब ८० वर्षका बुज्रुगले बोलेका कुरालाई मैले सकारात्मक रुपमा लिँदै टाउको हल्लाएकी थिएँ । त्यसको दुईतीन महिनापछि मलाई इमेल आयो।
उहाले त गम्भीर रुपमै लिनुभएको रहेछ । म भारत आएको बेला तपाईं आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न थियो । उहाँ कार्यक्रम र भेटघाट तय गर्न उत्सुक भइसक्नुभएको रहेछ।
अस्तिको मे वा जुनमा आउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने उहाँको प्रश्न थियो । मैले जुलाईमा मात्र जान सक्ने जवाफ फर्काएँ । उहाँले त्यही समय मिलाएर ८ देखि १५ तारिखसम्मको कार्यक्रम तय गर्नुभएछ।
मेरो ३० जुनमा इन्डोनेसियामा कन्सर्ट थियो । त्यसै हिसाबले २७ तारिख काठमाडौंबाट हिँड्नेवाला थिएँ । त्यसभन्दा करिब पाँच दिनअघि मात्र मेरो अफिसमा एआर रहमानको कार्यालयबाट फोन आएछ।
‘रहमानको एउटा कम्पोजिसनमा गाउनका निम्ति आउन समय मिल्छ ?’ भनेर सोधिएछ । फोन उठाउने आनीहरुले कहिले आउनु पर्छ भनेर सोध्दा ३० तारिख मुम्बई पुग्नुपर्ने जवाफ दिइएछ । ३० तारिख त इन्डोनेसियाको कन्सर्ट थियो । अर्कोतर्फ एआर रहमानको फोन आएको कुराले असाध्यै खुसी थिएँ । समय बाझिएकाले यस्तो राम्रो मौका गुम्ने भयो भनेर चिन्ता लाग्न थाल्यो । इन्डोनेसियाको कन्सर्ट एक वर्षअघि नै तय भएको थियो।
मैले माफी माग्दै ३० तारिख आउन नसक्ने बताएँ । उताबाट कहिले सकिन्छ भनेर सोधियो । म आफैं पनि हतारिएकी थिए, त्यसैले एक तारिखै मुम्बइ पुग्न सक्छु भनेर बताइदिएँ।
‘हुन्छ’ भनियो । म इन्डोनेसियाबाट काठमाडौं नआई मुम्बइ ओर्लिएँ।
एक तारिख राति मुम्बईमा ओर्लंदा दस बजिसकेको थियो । सरासर होटल गएँ । भोलिपल्ट बिहान दस बजे मलाई वेस्टिन होटलमा बोलाइयो । होटलको ३१ औं तल्लामा रहमानको स्विट रहेछ । त्यहाँ उहाँका असिस्टेन्टले लिफ्टमै कुरिरहेका थिए । पछ्याउँदै बढेँ । ढोका खोल्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिले रहमानकी श्रीमतीलाई देखेँ । पारिवारिक फोटो पहिल्यै देखेकीले मलाई चिन्न अप्ठेरो परेन । श्रीमती रहमानले मलाई अभिवादन गर्दै धन्यवाद दिनुभयो । त्यतिबेलै रहमान पनि आइपुग्नुभयो । रोजा सिनेमादेखि नै असाध्यै मनपर्ने संगीतकार भएकाले मैले रहमानसम्बन्धी थुप्रै लेख र कार्यक्रम नछुटाइ हेर्दै आएकी थिएँ । यति धेरै जानकारी पाइसकेको मान्छेलाई भेट्दा कुनै नयाँ व्यक्ति देखेजस्तो हुँदैन रहेछ । हामी सोफामा बसेर प्रोजेक्टका ’boutमा कुरा गर्न थालिहाल्यौं।
विश्वप्रसिद्ध सांगीतिक च्यानल एमटिभीमा केहि समययता लोकप्रिय कार्यक्रम ‘कोक स्टुडियो’ प्रसारण हुँदै आएको छ । यसको सुरुवात पाकिस्तानतिरबाट भएको हो । बेग्लाबेग्लै धारका सांगीतिक अभ्यासलाई मिसाएर एक किसिमको बेग्लै प्रयोगधर्मी कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । कोकाकोलाले प्रायोजन गर्ने भएकाले कोक स्टुडियो भनिने यसमा रहमान प्रस्तोता हुनुहुँदोरहेछ । आगामी अगस्तको मध्यतिर प्रसारण हुने शृंखलाको निम्ति रहमानले मलाई छनौट गर्नुभएको रहेछ । हरेक शृंखलामा छवटा गीत रहनेमा एउटामा चाहिँ मलाई उपयुक्त ठहर्‍याइएको जानकारी दिइयो।
‘यो गीत एउटी आमाको ’boutमा हो’ सोफाको अर्को छेउ बसेका रहमान भनिरहनुभएको थियो, ‘यसको रफ कम्पोजिसन गरिसकेको छु।’
उहाँले रेकर्ड अघि बढाउँदै ‘यसलाई सुनेर तपाईंको परम्पराअनुसार नेपाली वा हिमाली पारामा कसरी के गर्न सकिन्छ हेर्नुस्’ भन्नुभयो।
‘आमाको गुणलाई झल्काउने सबैभन्दा राम्रो मन्त्र भनेको करुणामयी देवताको मन्त्र हो,’ मैले उहाँलाई भने, ‘म त्यही भाकामा गाउँछु ।’ मैले एक दुई मेलोडी त्यहीँनिर सुनाइदिएँ । उहाँ खुसी हुनुभयो।
‘ यो ठीक छ,’ उहाले भन्नुभयो, ‘हामीले यही नै गर्ने हो।’
पहिलो भेटघाटमै उहाँले मेरो आवाज र रेन्जसँग परिचित रहेको जानकारी दिँदा म चकित भएँ । ‘तपाईंका गीत मैले युट्युबमा सुनिसकेको छु’ भन्दा असाध्यै खुसी पनि लागेको थियो।
कुरा सकेपछि दिउँसो चार बजेतिर हामी स्टुडियोमा फेरि भेट्यौं । त्यहाँ अरू पनि थुप्रै संगीतकार रहेछन् । मुम्बईकै सबैभन्दा नाम चलेका पर्कसनिस्ट शिवामणि पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो । रहमानका दुई दिदी पनि गायिका हुनुहुँदोरहेछ । सबैसँग भेट भयो । इन्डियन आइडल र सारेगामामा भाग लिइसकेकी अदिती पल र प्राजक्ता जस्ता मैले टिभीमा चिनिरहेका अनुहार त्यहाँ कोरस गाउन तयार थिए।
हामीले दुई घन्टा अभ्यास गर्‍यौं।
भोलिपल्ट त्यसै स्टुडियोमा मेरो प्रोमो सुट गर्नुका साथै एमटिभीले एउटा अन्तर्वार्ता पनि लियो । तेस्रो दिनदेखि फाइनल सुट नै सुरु भयो । यसरी पाँच दिन व्यस्तताका साथ मुम्बईको त्यो स्टुडियोमा बित्यो।
रहमानले काम गरिरहेकै बेला मलाई एउटा फरक प्रश्न पनि सोध्नुभएको थियो । ‘अरु किसिमका गीत पनि तपाईंले गाउन मिल्छ ?’ उहाँको यो प्रश्नले मलाई एक किसिमको खुसी महशुस गराएको थियो । मैले प्रतिप्रश्न गरेँ, ‘अरु किसिमका भन्नाले कस्तो खालको गीत भन्नुभएको ?’ उहाले अलिक आधुनिक र ‘प्यापी’ गीत भनेर प्रस्ट पार्नुभयो।
मैले आफुलाई गायकीको शैलीमा समस्या नभए पनि विषयवस्तुप्रति चाहिँ चासो रहने र त्यसबाट सकारात्मक सन्देश जाने हुनुपर्ने प्रस्ट पारेँ।
‘ओ, आइसी…’ उहाँ यति मात्र भनेर चुप लाग्नुभयो।
काम गरिरहेकै बेला बीचबीचमा उहाँको हेयर स्टाइल मिलाउन स्टाइलिस्टले कपाल चलाइरहनुपर्ने रहेछ । त्यसै क्रममा एकपटक उहाँले मलाई औंला देखाउँदै मेरो पनि एकताका तपाईंजस्तै कपाल थियो भनेर सुनाउनुभयो । ‘हज जाने बेला,’ उहाँले थप्नुभयो।
संसारलाई सुमधुर धुन सुनाएको सुनायै गर्ने रहमान आफू भने असाध्यै कम बोल्ने स्वभावको हुनुहुँदो रहेछ।
असाध्यै सरल र मिलनसार व्यक्ति हुनुचाहिँ मलाई सबैभन्दा बढी परेको प्रभाव हो।
काम गर्दा पनि जहिल्यै प्रशंसा गर्ने । ‘भेरी नाइस’ त थेगो नै जस्तो । रहमानको ’boutमा कुरा गर्दा उहाँका सहयोगी वाद्यवादकहरुको प्रशंसा छुटाउन मिल्दैन । बिहानदेखि बेलुकीसम्मै अनवरत मेहनत गर्ने।
हाम्रो नेपालमा रिहर्सल गर्दा कतिपय वाद्यवादक बीचैमा भोज छ भनेर हिँडिदिन्छन् । एक घन्टाको मात्र रिहर्सल छ भने पनि सबैलाई जुटाएर राख्न मुश्किल पर्छ । तर, त्यहाँ अवस्था एकदमै बेग्लै । दिएको समय पूरै काममा केन्द्रित भएर खट्ने । यसले पनि मलाई प्रभाव पार्‍यो।
यसरी रहमानसँग पाँच दिनको कामपछि मेरो पुनामा ८ तारिख आयोजित कन्सर्ट थियो । त्यसलगत्तै मुम्बइको सेन्ट एन्डर्स हलमा अर्को कन्सर्ट थियो । त्यहाँ आठ सयभन्दा बढी दर्शकले एक साथ हेरेका थिए । यो कन्सर्ट टिना अम्बानीका भिनाजुको आयोजनामा भएको थियो।
यो सकिएपछि म नेपाल फर्किएँ । मलाई मुम्बईको कन्सर्टमा रहमानलाइ पनि बोलाउने इच्छा त थियो तर यो आयोजकसँगको पहिलो कन्सर्ट भएकाले व्यवस्थापन के कस्तो छ भन्ने थाहा नभएरै सकसक लाग्यो र बोलाइन।
पुनामा मेरो कन्सर्ट हुने दिनमै बिहान सबेरै मेरो मोबाइलमा एउटा एसएमएस आएको थियो । ‘सो स्याड टु सी टुडेज न्यूजपेपर अबाउट द ब्लास्ट, आइ होप आवर संग्स चेन्जेज एभ्रीथिंग।’
गयामा भएको विस्फोट’bout उल्लेख गर्दै रहमान भनिरहनुभएको थियो, ‘मलाई विश्वास छ हाम्रा गीतहरुले सबैथोक बदलिदिनेछन्।’
मैले पनि तत्काल जवाफ फर्काएँ, ‘इन्साअल्लाह । मे वी अल बि एबल टु डेभलप मोर एन्ड मोर रेस्पोन्सिबल बिहेभियर टु इन्जोय ट्रु हार्मोनी पिस एन्ड हेप्पिनेस इन द वर्ल्ड।’
यही नै रहमानसँगको मेरो अन्तिम संवाद थियो।
मेरो विश्वास छ म उहाँसँग छिट्टै भेट्दैछु।
This entry was posted in जीबनशैली, जीबनी. Bookmark the permalink.
One response to “मेरो विश्वास छ म उहाँसँग छिट्टै भेट्दैछु (आनी छोइङ डोल्मा)”
kiran khadka | 26/07/2013 मा 3:36 अपराह्न |
best of luck aani chhoing dolma didi..